Akhriso: Nuxurka Qodobada ay ku heshiiyeen soomalia iyo itoobiya iyo qodob kamid ah oo aad u taabanaya in…… | Kismaayo24 News Agency
Akhriso: Nuxurka Qodobada ay ku heshiiyeen soomalia iyo itoobiya iyo qodob kamid ah oo aad u taabanaya in……
Thursday May 4, 2017 - 2:51 under Somali News by Tifaftiraha K24
Madaxda dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si wadajir ah u soo saaray War Murtiyeed la xiriira booqasho rasmi ah oo uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmajo ku tagay magaalada Addis Ababa.
War Murtiyeedka ayaa lagu sheegay in ujeedada booqashada Madaxweyne Farmaajo ee dalka Itoobiya ay ahayd mid lagu xoojinayay xiriirka u dhexeeya labada dal, iyadoo labada hogaamiye ay yeesheen wada hadalo miro dhalay ayna labada dhinac isku aragti ka noqdeen arrimaha caalamka.
“Labada hogaamiye waxa ay is dhaafsadeen aragtiyo ku wajahan sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal iyagoo isku raacay in labada dhinacba ay raali ka yihiin xiriirkooda ayna sii adkeynayaan.”ayaa lagu yiri warmurtiyeedkan oo goor dhow soo baxay.
Qoddobada muhiimka ah ee warmurtiyeedkan ku qornaa ayaa waxaa kamid ahaa.
In Heshiisyadii Labada dal horay u galeen la sii xoojiyo, lana dedejiyo fulintooda.
In la sameeyo guddi heer sare ah oo diyaariya wada shaqeynta labada dal.
In la fududeeyo dhaq-dhaqaaqa adeegga iyo dadka ee labada dal.
In la taageero AMISOM sidii ay u xasilin laheyd Soomaaliya.
In la dhiso ciidamo tayeysan oo Soomaaliyeed si ay ammaanka ugala wareegaan AMISOM.
In la dhowro heshiisyada caalamiga ah ee al xiriira arrimaha qaxootiga.
In ciidamada Booliska la xoojiyo isla markaana la kordhiyo la dagalaanka burcad badeeda ka soo cusboonaatay xeebaha Soomaaliya.
In Soomaaliya loo madax-banaaneeyo arrimaha shirka London
In wadamada IGAD ay hal cod oo mideysan ku tagaan shirka London.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayey kala saxiixdeen labada masuul waxaana labada dal ay heshiisyadaan ku macneeyeen kuwo wax gel u ah xiriirka labada dal.